Garsoore Lee Mason oo dhex dhexaadin doona kulanka Arbacada Chelsea vs Man United. - Caasimada Online
Home Warar Garsoore Lee Mason oo dhex dhexaadin doona kulanka Arbacada Chelsea vs Man...
Garsoore Lee Mason oo dhex dhexaadin doona kulanka Arbacada Chelsea vs Man United.
Garsoore Lee Mason ayaa gacanta loo gelshay inuu Firimbiga u qaato kulanka Chelsea vs Manchester United ee arbacada ka dhici doona Stamford Bridge.
Tababaraha kooxda United Sir Alex Ferguson ayaa ka dib ciyaartii axada isagoo qoslaya wuxuu yiri: “Nasiib ayaan ku laheyn Garsooraha”. Xilli ay ciyaar aan jawi hagaagsan ku dhamaan dhex martay labada koox.
Waxaana Mason laga sugi doonaa inuu garsooro kulanka wareega afaraad ee Capital One Cup ay United ku qaabili doonto Chelsea.
Waxay imaneysaa ka dib sedax maalmood markii ay Chelsea cabasho rasmi ah ka gudbisay Garsoore Mark Clattenburg kasoo saameyn weyn ku yeeshay kulankii ku idlaaday 3-2, ka dib markii uu kaarka cas u taagay daafaca Chelsea Branislav Ivanovic iyo weeraryahankooda Fernando Torres.